I-townhouse emangalisayo enethafa 2min ukusuka kwi-Ski lift
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguInessa
Ihonjiswe ngokupheleleyo "isitayile se-chalet" yedolophu enemigangatho emi-4 (300sq m) ibekwe kwindawo ekhethekileyo yaseAndorra! Ineembono zentaba ukusuka kwi-terrace ngelixa isembindini weLa Massana kunye nomgama wokuhamba kuyo yonke into oyifunayo: i-ski lift, iivenkile ezinkulu, isikhululo sebhasi, iindawo zokutyela ...
Indlu inendawo yokutyela entle enazo zonke izixhobo zasekhitshini kunye nethafa. Kukho amagumbi okulala ayi-3 ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala. Igumbi lokulala eliphambili labazali likumgangatho owahlukileyo kwaye linebalcony yabucala eneebhedi zelanga ezi-2. Kukho amagumbi okuhlala ama-2, enye yawo enebhedi ye-sofa (inokuguqulwa ibe yindawo yokulala yabantu aba-2) kunye nendawo ye-cinema yasekhaya. Kukho i-WiFi kuyo yonke imigangatho kunye negaraji yemoto enye.
Le ndlu ikwindawo ekhethekileyo-embindini weLa Massana ngelixa isekwindalo. Ungafumana yonke into oyifunayo kwimizuzu nje embalwa yokuhamba: 2min ukusuka kwi-ski lift ukuya ePal, iivenkile eziqashisayo zokutyibiliza, iivenkile zokutyela, ikhemesti, iivenkile ezinkulu, iibhaka kunye nebala lokudlala labantwana.
Indlu ikumgca wesibini, ngoko ke ithule kakhulu, nangona ukufutshane kwesixeko!
Umbuki zindwendwe ngu- Inessa
Hi my name is Inessa and I am renting my townhouse in La Massana. Please feel free to reach out to me for any inquiry and advices about the country and local attractions during your stay!
Ndingabonelela iindwendwe zam ngalo lonke ulwazi malunga neendawo zokutyela ezilungileyo kunye neendawo. Ndizakwabelana ngekhonkco kwiNcwadi yesiKhokelo yaseAndorra endiyidalileyo enezindululo ezininzi eziluncedo!